Umthandazo wokuzola kunye nokuqinisekisa umntu. ? (Ngobukrakra nangomsindo)
Umthandazo wokuthoba kunye nokuqinisekisa umntu Kubalulekile kuba asazi ukuba lingakanani ixesha lesidingo sokuyenza.
Ngamaxesha amaninzi sihambahamba okanye sikunye nosapho kwaye sifumana iimeko apho kufuneka siphole umntu otshintshileyo okanye oqhubeka ngesidingo sokomoya apho umthandazo kuphela kwento enokusetyenziswa ukumqinisekisa, kuba Yilapho lo mthandazo ubaluleka khona.
Ayinamsebenzi nokuba ngowasemzini, imithandazo Zinamandla kakhulu kwaye zingenziwa naphina.
Yiba apho sihlala sithandaza khona sinokuba sisixhobo sethu esinokusisebenzisa naphi na xa sinokholo.
1 1) Umthandazo wokuqinisekisa umntu onoburharha
2 2) Umthandazo wokuqinisekisa umntu onomsindo
3 3) Umthandazo wokuphelisa iintlungu kunye nomsindo wesi sibini
4 4) Umthandazo wokuthoba umntu ocaphukisayo
4.1 Ndingayifumana nini imithandazo?
1) Umthandazo wokuqinisekisa umntu onoburharha
“Nkosi yam, umphefumlo wam ukhathazekile; usizi, uloyiko kunye noloyiko lundongamele.
Ndiyazi ukuba oku kwenzeka ngenxa yokuswela kwam ukholo, ukungabikho kokulahlwa ezandleni zakho ezingcwele kwaye ndingathembeli ngokupheleleyo kumandla akho infinito. Ndixolele Nkosi wandise nokholo lwam. Sukujonga iintsizi zam nokuzicingela kwam.
Ndiyazi ukuba ndiyoyika, kuba ndiyanyanzelisa, ngenxa yosizi lwam, ukuhlala ndithembele kwimikhosi yam elusizi, endonwabileyo, ngeendlela zam kunye nezixhobo zam. Ndixolele, Nkosi, undisindise, Owu Thixo wam.
Ndinike ubabalo lokholo, Nkosi; Kundinika ubabalo ukuthembela eNkosini ngaphandle kwamanyathelo, ngaphandle kokujonga ingozi, kodwa ndijonge kuwe, Nkosi; Ndincede, Owu Thixo!
Ndiziva ndindedwa kwaye ndilahliwe, kwaye akukho mntu unokundinceda, ngaphandle kweNkosi.
Ndizishiye ezandleni zakho, Nkosi, kuzo ndibeka izintso zobomi bam, indlela endihamba ngayo, kwaye ndishiya iziphumo ezandleni zakho. Ndiyakholelwa kuwe Nkosi, kodwa yandisa ukholo lwam.
Ndiyazi ukuba iNkosi evukileyo ihamba ecaleni kwam, kodwa ngoku ndisoyika, kuba andinakho ukuzishiya ezandleni zakho. Ndincede ubuthathaka bam, Nkosi.
Lo mthandazo wokuthoba kwaye uqinisekise umntu unamandla ngokwenene!
Kula maxesha kunokuba yinto eqhelekileyo ukubona abantu becaphuka Babonakala belindele nayiphi na imeko ukuba iqhume ngenkani.
Ngokuqinisekileyo sidibene neemeko apho ubukrakra bunokubonakala njengesisongelo sobomi bethu okanye kwabanye abantu abasijikelezileyo kwaye ke kulawo maxesha apho umthandazo uba yindawo yethu yokubalekela apho ubukrakra bungabi nxalenye.
2) Umthandazo wokuqinisekisa umntu onomsindo
«ISan Miguel enkulu
Unamandla enkosi yemikhosi yeNkosi
Wena woyise ububi izihlandlo ezininzi
Kwaye uya kuyibetha ngalo lonke ixesha ufuna
Suka kum yonke into imbi
Lonke utshaba oluzama ukuthembeka kwam
Ndizolile abo basekhona ebomini bam
Banike uxolo kwaye bazolile
Babonise indlela abahamba ngayo
Ukucaphuka yenye yeemvakalelo esinazo thina bantu kwaye kunzima ukuzilawula, ngakumbi ngala maxesha wengqumbo apho singazibuziyo izinto esizenzayo okanye esizithethayo.
IPodemos ukubonwa kubantu abanomsindo rhoqo kwaye ukuba ingqumbo inokuqhuma nangaliphi na ixesha, ngaphandle kokuba siyibone iza kwaye ngaphandle kokukwazi ukwenza nantoni na ukuyiphepha.
Nangona kunjalo, xa sinolwazi lwehlabathi lokomoya elisingqongileyo, sinokuba negunya kwezi meko ngokunyusa nje isivakalisi. Umntu oziva enomsindo unokuziva emzimbeni wakhe ukuba yonke into yenzeka njani kwaye nguThixo oqala ukuthatha ulawulo lwezenzo zakhe ukuze umsindo ungabe usamlawula.
3) Umthandazo wokuphelisa iintlungu kunye nomsindo wesi sibini
«Zingelosi ezithandekayo, zezulu, zezikaThixo nezidalwa ezinamandla ngomsebenzi kaThixo
Wena uluthando kwaye unike uthando
Bazalelwa ukwenza umsebenzi wabo kwaye ukuza kuthi ga ngoku baye basilela
Ndincede ndoyise le ngxaki.
Ndincede ukuba andiqonde
Qonda iingxaki zam, ukuze ndiqonde ezakho
Qondisisa ubunzima bam, ukuze uqonde nobakho
Umnikeze aze athethe nam, ukuze ndinikezele kwaye ndiyamthanda
Sincede soyise le ngxaki inzulu
Zingelosi ezithandekayo, ulukhanyiso lwam
Isikhokelo sam, kunye nethemba lam
Lo mthandazo wokuphelisa ukudakumba kunye nokuvutha kwesi sibini unokusetyenziswa ngawo onke amaxesha kunye neemeko.
Umzekelo, umntu ojamelene neentlungu kakhulu zomzimba okanye zomphefumlo unokuzola emva kokufumana omnye wale mithandazo.
Khumbula ukuba kumaxesha oxinzelelo okanye xa umzimba nengqondo yomntu iphazamiseka ngendlela engaqhelekanga, umthandazo sisixhobo esinokuthi sisisebenzise kwaye sisazi ukuba siyasebenza ngalo lonke ixesha kunye neendawo.
4) Umthandazo wokuthoba umntu ocaphukisayo
«Nkosi endimthandayo, ndibeka umsindo nengqumbo endihlala ndihleli entliziyweni yam ezinyaweni zakho kwaye ndiyathandaza ukuba ngobabalo lwakho ubhence konke okubangela ityhefu ekrakra ehlala entliziyweni yam rhoqo ebusweni, kwaye ndikhululekile mna kuyo
Nkosi ndiyawuvuma wonke umsindo wam nobukrakra kwaye ndiyazi ukuba xa ndivumela oku kubekwa entliziyweni yam, kuyaphula umthendeleko esinawo kunye.
Ndiyazi ukuba xa ndiyivuma ingqumbo yam, uthembekile kwaye ulungile ukuba uxolele ukukhupha ingqumbo entliziyweni yam kunye nokundicoca kubo bonke ububi, endilidumisayo igama lakho.
Kodwa, Nkosi, ndinqwenela ukuba undikhulule kule ntsholongwane ngaphakathi entliziyweni yam ukuze ingcambu yomsindo ishiye ngaphakathi, kwaye ndicela undijonge kwaye ukhuphe yonke into engathandekiyo emehlweni akho.
Enkosi ngegama likaYesu,
Ngamaxesha amaninzi iingxaki zentsuku zemihla ngemihla ziqokelela emzimbeni nasemoyeni kude kufike umzuzu obonakala ngathi ugqitha umda kwaye yonke into iqhuma, siphulukana nolawulo lwethu kwaye sinako ukwenza nabuphi na ubuhlanya.
Embindini welo xesha imithandazo ibalulekile kuba sinokuyisebenzisa ngelo xesha siyifunayo kwaye akukhathalekile nokuba ngubani osirhangqileyo. Imithandazo sisixhobo sokomoya esiya kuhlala sifumaneka kuthi.
Ndingayifumana nini imithandazo?
Imithandazo inokwenziwa naphi na apho kufuneka njalo.
Kukho abo bahlala bebekela bucala isixa esikhethekileyo semihla ngemihla ukuba bathandaze, kodwa kwezi meko apho kufuneka khona imithandazo, zinokwenziwa njengoko ziba sisixhobo sethu kuphela esinokuthi sisisebenzise
Sisenokuthandaza kusapho okanye emsebenzini kunye nabahlobo, kodwa kulungile ukuba ube nomzuzwana wedwa ukuba uthandaze kuba kulapho iintliziyo zethu zivulwa khona phambi kobukho beNkosi kwaye singathetha naye.
Ayinamsebenzi ukuba sisebenzisa amakhandlela, ukuba sidlala umculo othambileyo okanye wokomoya, siwenza ngokuzolileyo okanye ngokuvakalayo, into ebalulekileyo kukuba umthandazo ube yinyani, ukuba uvela ezinzulwini zeentliziyo zethu nokuba zenziwe ngokholo, ukwazi ukuba uThixo umamele kuthi kwaye uzimisele ukuphendula le nto siyicelayo.
Thatha ithuba amandla e umthandazo wokuthoba kwaye uqinisekise umntu. Hlala noThixo
Umthandazo onamandla wokuba i-ex yam ibuye